Ukuphupha iXanthippe ➡ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
USocrates yenye yezona zifilosofi zibaluleke kakhulu kulo lonke ixesha. Kude kube namhlanje, iimbono kunye neemfundiso zakhe zidluliselwa ezikolweni nasezidyunivesithi. Kodwa sisamazi umfazi wakhe uXanthippe namhlanje: wayejongwa njengophikisayo kwaye enengxabano, inyani. Ke xa sisithi kubomi bemihla ngemihla ukuba umntu obhinqileyo uyiXanthippe yokwenyani, sibhekisa emfazini uSocrates kwaye sithetha ukuba umntu ekubhekiswa kuye kunzima ukuba amthwale, unomsindo omfutshane kwaye unemvakalelo, okanye wenza njengomsindo.
Nangona "iXanthippe" iluphawu oludelelayo ekuvuseni ubomi, inokuba nentsingiselo xa siyiphupha. Kodwa kuthetha ntoni apha?
1 Uphawu lwephupha «Xanthippe» - Ukutolikwa ngokubanzi.
2 Uphawu lwephupha «Xanthippe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Xanthippe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Xanthippe» - Ukutolikwa ngokubanzi.
Nabani na onxibelelana nomfanekiso weXanthippe okanye owasetyhini angambiza ngokuba ngu "Xanthippe" ephupheni kufuneka akuqonde oku njengophawu lwesilumkiso ngekamva lakhe. Isimboli ikakhulu inxulumene ngqo nobomi bobomi bokwenyani okanye umtshato ahlala kuwo lo mntu kuthethwa ngaye. Isongelo apha Iimbambano kunye neengxoxo ezizayo.
Isizathu soku ayifuni nokuba kwizigqibo ezinkulu kunye neembono ezahlukeneyo ezinxulumene noko, kodwa izinto ezincinci zisenokuba sisizathu sokungavisisani. Omabini amaqabane asenokungavisisani kwaye abangele iingxaki omnye komnye. Oku kukhokelela ekubeni aphuphe ukuba uziva ukuba uya kuhlala njengoSocrates kube kanye nomntu onje uXanthippe kubudlelwane. Unqwenela ukuphumla kwaye abe nexesha elingakumbi lakhe.
Ngokukodwa ephupheni labasetyhini, uphawu "Xanthippe" lunokuqulatha isicelo esivela kwi-subconscious, kubomi bemihla ngemihla. cwaka ngakumbi gcina kwaye ube ngaphezulu kwezinto. Kuya kufuneka uzithembe kwaye ubenengqondo ngokwaneleyo ukuba ungavumeli inzondo kunye nokuthetha kusondele kakhulu kuwe, kodwa ukukhokela ubomi bakho ngendlela yakho, ulandela iinjongo zakho. Iimpikiswano ezincinci azizukusa ndawo apha.
IXanthippe nayo, ngokomgaqo, ephupheni. iinjongo zokunganyaniseki lumkisa abanye. Umntu ekuthethwa ngaye uhlala ebuza ezona njongo zoogxa bakhe kwaye angazivumeli ukuba ahlekiswe.
Uphawu lwephupha «Xanthippe» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwephupha, uphawu "Xanthippe" lunokubonisa ukuthandabuza komntu kuthethwa ngaye. Ngenxa yokuzithemba kwakhe okuphantsi, kunokuba nzima kuye ukoyisa ezinye izimvo zoontanga bakhe, kwaye uyazithandabuza kunye nokuzithemba kwakhe kwangaphakathi. Oku kusongela ekukhokeleni kwinto yokuba ukuphupha kunokuzisebenzisa gadalala okanye kuzilawule.
Kwiimeko ezinqabileyo, iXanthippe inokuba yiyo Isimboli sesondo ukuba. Oku kuyinyani ukuba ujongene nexhoba lendoda kwaye uziva (ubuncinci uhlobo oluthile) lokuvuselela inkanuko phambi komfazi oxabanayo kunye nomsindo ephupheni lakho. Ngokuka-psychoanalysts, emva koko unokuba notyekelo lwe-sadomasochistic.
Uphawu lwephupha «Xanthippe» - ukutolika kokomoya
IXanthippe inokuba luphawu kuye ephupheni lokomoya. diablo Yiba, okanye ube mnye ukungabikho kokusesikweni ngokomoya zimele.